थाहा खबर: प्रदेश सभामुखको भूमिकामा रहेका यी पाका प्रदेश सदस्य, कसको उमेर कति?
प्रदेश सभामुखको भूमिकामा रहेका यी पाका प्रदेश सदस्य, कसको उमेर कति?
काठमाडौं : आइतबार सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सातै प्रदेशमा पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुखबाट सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
त्यसपछि सभामुखको रूपमा शपथ लिएका जेष्ठ सदस्यबाट अन्य सदस्यले शपथ गराइयो। अब प्रदेश संसदले सभामुख छनोट नगरेसम्म तिनै जेष्ठ सदस्यले सभामुखको भूमिका निभाउनेछन्।
उमेरको आधारमा जेष्ठ भएको कारण सभामुखको भूमिका निभाएका सात जेष्ठ सदस्यको उमेर कति त?
जेठामध्येका जेठा बलदेव शर्मा
सातै प्रदेशमा जेष्ठ सदस्यबाट सभामुखको भूमिका पाएकाहरूमध्ये सबैभन्दा जेठा ५ नम्बर प्रदशेका बलदेव शर्मा रहेका छन्। उनको उमेर ७९ वर्ष पुगेको छ। सन् १९९५ मा जन्मिएका उनले आइतबार ५ नम्बर प्रदेशको सभामुखको भुमिका निभाएका हुन्। उनले जेष्ठ सदस्यको आधारमा प्रदेश प्रमुख उमकान्त झाबाट शपथ लिएका थिए। संसदले अर्को सभामुख छनोट नगरेसम्म शर्माले सभामुखको भूमिका निभाउनेछन्।
जेठामध्येका कान्छा जनकलाल श्रेष्ठ
४ नम्बर प्रदेशका जेष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ भने सातै प्रदेशका जेष्ठ सदस्यहरूमा सबैभन्दा कम उमेरका हुन्। उनको उमेर सबै प्रदेशका जेष्ठ सदस्यको भन्दा १२ वर्ष कम छ। उनी ६७ वर्षका भए। तर श्रेष्ठ ४ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य हुन्। उनले आइतबार प्रदेश नम्बर- ४ को सभामुखको रूपमा शपथ गरे र गराए। उनले सभामुखको रूपमा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरबाट शपथ लिएका हुन्।
क्रमश: अन्य प्रदेशका जेष्ठ सदस्यको उमेर
२ नम्बर प्रदेशका जेष्ठ सदस्य तथा सभामुखको भूमिका पाएका ललनलाल चौधरीको उमेर ७५ वर्ष पुगेको छ। उनले सभामुखको रूपमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्‍वरलाल कायस्थबाट शपथ लिए भने अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराए।
१ नम्बर प्रदेशका जेष्ठ सदस्यको उमेर ७४ वर्ष रहेको छ। प्रदेश नम्बरका प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश शरावगीले जेष्ठ सदस्यको रूपमा आइतबार सभामुखको भूमिका निभाएर उनले प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्‍बाबाट शपथ लिए।
७ नम्बर प्रदेशका जेष्ठ सदस्य दिव्येश्‍वरी शाहको उमेर पनि ७४ वर्ष रहेको छ। उनले सभामुखको रूपमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लबाट शपथ लिएका हुन्।
३ नम्बर प्रदेशका जेष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलको उमेर ७१ वर्ष रहेको छ। उनले आइतबार प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट सभामुखको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराएका थिए।
६ नम्बर प्रदेशका जेष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको उमेर भने ६८ वर्ष रहेको छ। यो प्रदेशका जेष्ठ सदस्यको रूपमा आइतबार उनले प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। त्यसपछि उनले अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराएका हुन्।
धनगढीः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्। तेस्रो अधिवेशनको आठौँ बैठकलाई बुधवार बिहान प्र...
'सुनकाण्डका ठूला माछा भनेर मन्त्रीलाई भन्नुभएको ?'
काठमाडौंः गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार सफल रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको शुन्य र विशेष समयमा राष्ट्...
भ्रष्टाचार रोक्न जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकु...
देउवाको गृहजिल्लामा ओलीको बोली : पश्चिम सेती वर्तमान सरकारले नै बनाउँछ
डडेल्धुरा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७५० मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य आगडि बढाउने बताएका छन्। ...
भरतपुर महानगर : झगडालु सासू-बुहारी बस्ने घरजस्तै
चितवन : चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद चर्किँदै गएको छ। उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आफ्ना असन्तुष्टि सा...